Isikhungo sezomlando samakamelo angu-2 abukekayo - I-Airbnb
Isikhungo sezomlando samakamelo angu-2 abukekayo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Arnaud & Delphine
U-Arnaud & Delphine Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle elitholakala enhliziyweni ye-Aix-en-Provence emgwaqweni omncane othule eduze kwasePavillon Vendome, iCours Sextius kanye nePlace de la Mairie. Ifulethi elihlotshiswe ngesitayela sesimanje nesifudumele elinegumbi lokulala elihlukile, linakho konke ukunethezeka kwesimanje futhi likwazi ukuhlalisa abantu abangu-3 ngokukhululeka. Imboza indawo engu-40m2, itholakala esitezi sokuqala ngaphandle kokuphakanyiswa.
Emindenini sinikeza umbhede, isihlalo esiphezulu kanye nokugeza kwezingane.
Ifulethi eligqamile nelinokuthula elibheke emgwaqweni nasegcekeni.
Indawo ezungeze idolobha elikhulu itholakala kahle kakhulu, iphephile futhi iseduze nezitolo, amathilomu nezindawo zokudlela. Ifulethi lisanda kulungiswa ngekhishi elivulekile elinakho konke, indawo yokudlela yendawo yokuhlala efudumele nenethezekile. Isesitezi sokuqala ngaphandle kokungena kwekheshi. Uzothola ikamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili (amasentimitha angu-140 x 200), ikhishi elikhulu eliyinhloko - igumbi lokudlela - igumbi lokuphumula elinombhede wesofa (umuntu oyedwa), ikamelo lokugezela elineshawa engena endlini yangasese kanye nendawo yokungena encane enekhabethe lokugcina izinto.
Ngokuhlala kwakho, nginikeza konke ngezidingo zakho eziyisisekelo, njengekhofi, itiye, i-shampoo, i-shower gel, amashidi, amathawula okugeza, nokuningi ... Ngemva kokuqasha ngakunye, ifulethi lihlanzwa ngobuchwepheshe. Ngihlala eduze futhi ngivumelana nezimo nezikhathi zokungena, nginesistimu eyinhloko ezimele.
4.95 · 219 okushiwo abanye
Ukujikijelwa kwetshe kusuka ku-Cours Sextius kanye ne-Rue des Cordeliers ekhuphukela esigcawini sehholo ledolobha lapho kukhona imakethe yabalimi nsuku zonke. Ngemizuzu embalwa uhamba ngezinyawo ungafinyelela endaweni edumile ye-Place de la Rotonde kanye ne-Cours Mirabeau. Lapha uzothola ukukhethwa kwamathilomu asezingeni eliphezulu, amabhikawozi, izindawo zokudlela kanye nezitolo.
Ibungazwe ngu-Arnaud & Delphine
UArnaud & Delphine Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 13001002134MP